कमोडिटीसम्बन्धी नियमावली लागू | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर कमोडिटीसम्बन्धी नियमावली लागू
कमोडिटीसम्बन्धी नियमावली लागू
काठमाडौं । गत साउनमा बनेको वस्तु बजार (कमोडिटी)सम्बन्धी ऐनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपाल धितोपत्र बोर्डले शनिवारदेखि नियमावली लागू गरेको छ । गत शुक्रवार अर्थ मन्त्रालयले कमोडिटीसम्बन्धी नियमावली स्वीकृत गरेपछि बोर्डले कमोडिटी नियमावली २०७४ लागू गरेको हो ।
नियमावली कार्यान्वयनमा आएसँगै यसअघि विनास्वीकृति सञ्चालन गर्दै आएका कमोडिटिज एक्सचेञ्जले अनिवार्य रूपमा बोर्डको अनुमति लिनुपर्ने छ । यस्तो कारोबारका लागि न्यूनतम चुक्तापूँजी रू. ५० करोड हुनुपर्ने छ । कसैले पनि कूल शेयर पूँजीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर स्वामित्व ग्रहण गर्न नपाउने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ ।
नियमावलीअनुसार वस्तु विनिमय बजारको लागि अनुमति लिन चाहनेले बोर्डमा निवेदनसहित रू. २५ हजार दस्तुर तिर्नुपर्ने छ । यसअनुसार बोर्डले स्वीकृति दिन योग्य ठानेमा कागजात प्राप्त भएको ३० दिनभित्र ५० हजार रुपैयाँ शुल्क लिएर पूर्वस्वीकृति दिने व्यवस्था छ । अन्तिम स्वीकृतिका लागि भने बोर्डले २५ लाख रुपैयाँ लिन पाउनेछ । कमोडिटी एक्सचेञ्ज कम्पनीले अनुमति पाएपछि ६ महीनाभित्र वस्तुबजार सञ्चालनका लागि विद्युतीय कारोबार प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनमा लागि कम्तीमा २ हजार वर्गफिट क्षेत्रफल, स्वचालित कारोबार तथा राफसाफ प्रणाली, सर्वसाधारणका लागि सरल पहुँच हुने स्थानमा कार्यालय र बोर्डले तोकेको पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने छ । यसैगरी, वस्तु कारोबार व्यवसायीले कार्यालयको क्षेत्रफल कम्तीमा ६ सय फिट र कार्यालयका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । यस्तै, राफसाफ तथा फर्छ्योट कारोबार व्यवसायीका लागि कार्यालयको क्षेत्रफल कम्तीमा १ हजार वर्गफिट, कार्यालयका लागि आवश्यक सामग्री, योग्यता पुगेका कर्मचारीलगायत व्यवस्था हुनुपर्ने छ भने वेयर हाउसले पनि बोर्डले तोकेको मापदण्ड ६ महीनाभित्र पुर्‍याउनुपर्ने छ ।
यस्तो प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र बोर्डले व्यवसाय सञ्चालनको अन्तिम अनुमति दिने व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीअनुसार सञ्चालनमा आइसकेका पुराना कमोडिटी एक्सचेञ्जले पनि अनुमति लिनुपर्ने छ ।
गत भदौमा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको वस्तु बजारसम्बन्धी ऐनलाई ९१ दिनपछि लागू गर्ने उद्देश्यले बोर्डले उक्त नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । नेपालमा २०६४ सालदेखि वस्तु बजार (कमोडिटी)को कारोबार हुँदै आए पनि नियमनको दायरामा आएको थिएन । ऐन आएपछि लागू गर्न बोर्डले गत कात्तिक २१ गते प्रस्तावित वस्तु विनिमय बजार नियमावलीका सम्बन्धमा सरोकारवालासँग अन्तरक्रियासमेत गरेको थियो ।
कमोडिटी बजारको कारोबार गर्दा बोर्डमा दर्ता भएको करार र तोकिएको वस्तुमात्र कारोबार गर्न पाइनेछ । व्यवसायीले लगानीकर्ताको आदेश लिएर मात्र लगानीकर्ताका लागि कारोबार गर्नुपर्ने छ भने दलाल व्यवसायीमार्फत लगानीकर्ता आफैले विद्युतीय रूपमा कारोबार गर्न सक्नेछन् । यस्तो कारोबारमा जिम्मेवारी व्यवसायीको हुने छ र लगानीकर्ताको पूर्ण अभिलेख राख्नुपर्ने छ । यसका साथै रकमको लेनदेन बैङ्कमार्फत मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिएको छ ।
कमोडिटी बजारको कारोबार गर्ने कम्पनीले वस्तु विनिमय बजारको अनुमति लिएको ५ वर्षसम्म शेयर विक्री गर्न पाउने छैनन् । यसैगरी, योग्यता पूरा नगरेको व्यक्तिले शेयर स्वामित्व लिन पाउँदैनन् भने शेयर स्वामित्व लिएको व्यक्तिले शेयर हस्तान्तरण गर्न चाहेमा बोर्डको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसमा शेयर खरीद गरिलिनेको योग्यता पूरा भएको विवरण पेश गर्नुपर्ने र शेयर जफत गरिएमा सो शेयरलाई बोलकबोलबाट विक्री गरिने व्यवस्था छ । यसैगरी वस्तु विनिमय बजारले कारोबार शुरू गरेको वा स्थगन गरेको वस्तु करारको जानकारी तुरुन्त लगानीकर्तालाई दिनुपर्ने छ र वस्तु करार तयार गरी बोर्डमा दर्ताका साथै सूचीकरण तथा सूचीकृत करार मात्र कारोबार गर्नुपर्ने छ । यस्तै कम्पनीले राफसाफ व्यवसायी नियुक्त गरी सम्झौता गर्नुपर्ने छ भने दलाल व्यवसायी, बजार निर्मातालाई सदस्यता प्रदान गर्नुपर्ने छ ।
उक्त कारोबार गर्न वस्तु विनिमय बजारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने, अनुमतिपत्र, शेयर स्वामित्व, सञ्चालक, शुल्क तथा नियमन शुल्क, अभिलेख, जानकारी तथा विवरण प्रवाह गरिने, सुपरिवेक्षण, नियमन तथा कारबाही गर्नेलगायत सम्बन्धमा नियमावलीमा छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरिएको छ ।